Kitts & Nevis kwụsịrị njedebe na njem ụgbọ elu si India na South Africa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Saint Kitts na Nevis » Kitts & Nevis kwụsịrị njedebe na njem ụgbọ elu si India na South Africa
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ Saint Kitts na Nevis • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Kitts & Nevis kwụsịrị njedebe na njem ụgbọ elu si India na South Africa.
Dịka ekwuputara na Mee 29, 2021 naanị ndị njem nwere ọgwụ mgbochi oke ka a ga -anabata ịbanye na Federation.
Kitts & Nevis nabatara ndị njem ụgbọ elu mba ofesi ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa si India na South Africa.
Mwepụ nke mmachi njem n'oge a maka India na South Africa kwekọrọ na mbuli mmachibido ndị njem si UK na Septemba 1, 2021.
Mmachi njem St. Kitts & Nevis ka dị maka ndị njem mba ofesi si Brazil.
Kitts & Nevis nabatara ndị njem ụgbọ elu mba ofesi ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa si India na South Africa na Ọktoba 18, 2021, wepu mmachi na ndị njem si ebe abụọ a. Mwepụ nke mmachi njem n'oge a maka India na South Africa kwekọrọ na mbuli mmachibido ndị njem si UK na Septemba 1, 2021, wee kwekọọ na mmụba na -aga n'ihu nke ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi na Federation. Mmachibido njem ahụ ka dị maka ndị njem mba ofesi si Brazil.
N'etiti ndị okenye nke Kitts & Nevis, 77.4% anatala otu ọgwụ mgbochi AstraZeneca/Oxford, ebe 70.3% nke ndị toro eto gbara ọgwụ mgbochi nke ọma; n'etiti ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma dị n'agbata afọ 12 - 17, 10.9% n'ime ha natara ọgwụ izizi nke ọgwụ Pfizer/BioNTech yana 6.8% natara ọgwụ abụọ. (Ọnụ ọgụgụ dịka Ọktoba 19, 2021).
Na -amalite na Ọktoba 7, 2021, belatara “ezumike ebe” ka ọ bụrụ awa 24, ebe a na -anwale nnata RT PCR chọrọ na ụlọ oriri na ebe obibi nke “Travel Approved”. A ga-enweta nsonaazụ nnwale n'ime awa 24 "Ezumike ebe." Ndị njem ahụ nwere nsonaazụ nnwale na-adịghị mma nwere ike itinye aka na Federation mgbe oge awa 24 gafere ma nwee ọmarịcha ahụmịhe. Kitts & Nevis onyinye gụnyere, iri nri na ụlọ oriri na ọ, ụ, ụ, na-enwe ọmarịcha otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri dị na “The Strip,” na-eleta ihe nkiri pụrụ iche na nke pụrụ iche, na-asọfe mmiri doro anya, na-aga ugwu mgbawa, na-azụ ahịa ahịa ahịa mpaghara anyị ma ọ bụ naanị na -ajụ oyi n'otu n'ime osimiri anyị.
Nwepụ dị maka ụmụ amaala na ndị bi na Federation of St. Kitts na Nevis na ụmụaka na -erubeghị afọ 18 na -eso nne na nna ha ma ọ bụ ndị nlekọta ha ọgwụ mgbochi nke ọma.
Usoro ogbugba ndu niile na ihe achọrọ dịịrị maka Federation of St. Kitts & Nevis, gụnyere ntinye nke nsonaazụ nnwale sitere na nnwale RT PCR awa 72 tupu ọbịbịa.
A na -ele onye njem anya ịgba ọgwụ mgbochi oke mgbe izu abụọ gafere kemgbe ọ natara ọgwụ nke abụọ nke usoro ọgwụ mgbochi abụọ (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford, Sinopharm ma ọ bụ Sinovac), ma ọ bụ izu abụọ ka ha natachara otu ọgwụ mgbochi otu ( Johnson & Johnson). A nabatara ịgwakọta ọgwụ mgbochi akwadoro maka St. Kitts na Nevis.